Xukuumadda Ikhwaanul Muslimiinta Masar Oo Fashilayay Qorshe Mucaaradka U Jan-jeedha Reer Galbeedku Doonayeen In Xukunka Lagaga Tuuro Madaxweyne Mursi | Araweelo News Network (Archive) -
Xukuumadda Ikhwaanul Muslimiinta Masar Oo Fashilayay Qorshe Mucaaradka U Jan-jeedha Reer Galbeedku Doonayeen In Xukunka Lagaga Tuuro Madaxweyne Mursi
Qaahira(ANN) Sirdoonka Dawlada Masar ee uu hogaamiyo Maxamed Mursi ayaa ka badbaaday qorshe la doonayay in lagu inqilaabo oo xukunka lagaga tuuro Xisbiga haya talada dalka ee kasoo jeeda Ururka ikhwaanul muslimiinta. kadib markii axsaabta mucaaradka ee
ay hogaaminayaan Caamar Muusa iyo Max’med Albaraadici oo xidhiidh dhow la leh wadamada reer galbeedku debed baxyo rabshado wata ka bilaabeen magaalooyinka dalka Masar qaarkood.
Kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxay shalay shaaracyada wadooyinka waaweyn ee Fagaaraha Meydaanu Taxriir, kuwaas oo ahaa taageerayaashii madaxweynihii hore Mubaarak oo maxkamaddi hore xukun ku riday. Debed baxayaasha ayaa sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dalka Masar, waxay kasoo horjeedeen xil ka qaadista Madaxweynaha Masar ku sameeyay guddomiyaha Garsoorka, Gudoomiyihii Baanka iyo xubno kale oo mihiim ah, kuwaas oo ka tirsanaa nidaamkii Mubaarik, balse dadka taageerayay isbedelkii ka dhacay dalka ay hore u dalbanayeen talaabadaa.
Magaalada Askandariyah waxaa lagu gubay xafiiska Ururka Akhwaanka. sidoo kale magaalada 6 October iyana waxaa lagu weeraray xarumo ay leeyihiin taageerayaasha Maxamed Mursi. laakiin ciidamada amaanka ayaa ku guulaystay inaanay debed baxayaasha oo doonayay inay u hoydaan xalay fagaaraha Taxriir aanay u suurta gelin.
Madaxweyne Mursi ayaa khamiistii lasoo dhaafay Eryay Qaadiga guud ee maxkamadaha Masar wuxuuna ku dhawaaqay dastuur cusub oo ka duwan kii ay dejisay dowladdii hore ee Xusni Mubaarak, balse waxay mucaaradku ku tilmaameen arrintaa talaabo gef ah oo muujinay in nidaamkii lagu doortay sida dumuqraadiga ah uu isu bedelay digtaytarnimo iyo inuu samaysto awoodo dheeraad ah.
Laakiin xukuumadda ayaa Go’aanada ku sheegtay kuwo la doonayo in loogu adeegayo kacdoonkii Masar ka dhacay oo ujeedooyinkiisa ay kamid ahaayeen in la casilo dhammaan dadka muuqda ee lasoo shaqeeyay nidaamkii Mubaarak.
In kasta oo shacabka dalka Masar intooda badan talaabooyinkaa go’aanka Mursi oo ay ku tilmaameen mid geesinimo leh, hadana axsaabta mucaaridka Masar oo ay hogaaminayaan siyaasiyiin dhinaca reeg galbeedka u jan-jeedhaa, ayaa lagu tilmaamay inay hormood u yihiin debed baxyada socda, kuwaas oo doonaya inay gabood uga dhigtaan arrintan sidii xukunka looga tuuri lahaa Maxamed Mursi oo xisbigiisa Ikhwaanul muslimiintu hogaayaan dalka.
Dhinaca kale Bayaan kasoo baxay Ururka Akhwaanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Mursi uu fashiliyay qorshe halis ah oo lagu doonayay in lagu afgambiyo Thowradii Masar ka dhacday ee xukunka lagaga tuuray Xusni Mubaarak.
“Mu’aamaradu waxay u muuqatay mid lasii diyaarinayay bisha September ee sanadka soo socda waxaa la doonayay in garsoorayaasha qaar ay kala diraan golaha baarlamanka kadibna saraakiishii hore ee ciidanka ku dhawaaqaan marxalad cusub oo meesha ka saaray thowradii masar”ayaa lagu yidhi Bayaanka.
waxa muuqata in Sirdoonka Ikhwaanka ee dalka Masar ay heleen qorshe loo maleegayay xukuumadda uu hogaamiyo Maxamed Mursi, iyadoo wargeysyada qaarkood sida Almisriyuun ee kasoo baxda Qaahira ayaa baahisay in wadamada reer galbeedka ay qorshaha mucaaradka xagga danbe ka riixayaan, iyagoo doonaya in awoodaha Garsoorka Masar aan lagu wareejin Ikhwaanka.